Ahịhịa ya na otú ọ ga-enyere gị aka
E nwere ọtụtụ iri puku ihe na-agaghị ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na ahịhịa na Mac ma ọ bụ iDevice na-bupụrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ngwa na-eji na nke a ikwe onye ọrụ na-eme ka n'aka na usoro ego na-adịghị na-arụ na nke kacha mma n'ihi na-enwetara dị ka ngwa kwesịrị na-arụ ọrụ n'okpuru ọ bụla ọnọdụ. Ọ na-na-kwuru na na ahịhịa ya otu ndị dị otú ahụ ngwa na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe functionalities mgbe ọ na-abịa nsị ahịhịa dị ka ọtụtụ ọrụ ọ dịla otu n'ime ndị mbipụta na ga-eme ka n'aka na onye ọrụ odụk nsogbu jụụ mgbe. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma ngwa na usoro na-na-etinyere iji jide n'aka na ahịhịa na-arahụ n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Nke ikpeazụ akụkụ nke a nkuzi ga-ekwe ka onye ọrụ iji nweta a miri emi nghọta banyere isiokwu na-eme ka n'aka na ngwa na-eji na kasị mma n'ụzọ iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na kasị mma ngwa nke usoro bụ nanị kwe omume ma ọ bụrụ na ndị kasị mma usoro kwuru na a nkuzi na-soro.
N'okpuru nke ọnọdụ ga-n'ebemkpofuozi ọ ga-eji
E nwere ọtụtụ ihe na-enwe a pụtara na ngwa ma maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-abụghị nanị etinyere na ndị kasị mma n'ụzọ ma ha kwesịkwara-nyochaa iji jide n'aka na na ndị kasị mma na-etinyere na onye ọrụ ọkọkpọhi pụta a stellar n'ụzọ. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji nweta ihe kasị mma amụọ enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge ma ga-eme n'aka na onye ọrụ na-Tụlee ọnọdụ n'okpuru nke ya PC ma ọ bụ Mac idu mere na ngwọta e nwere ike etinyere ya. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma echichi ọrụ na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ na metụtara nkọwa na-amụ juputara:
1. Issues na ntuziaka trashing
Ọ bụ otu n'ime isi ihe mere ruru ka nke ahịhịa ya e ji mee na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ntuziaka trashing na nke a ma freezes ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ mgbe niile. Ahịhịa Ọ bụ mgbe ahụ arụnyere na dị ka a nnapụta iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
2. The ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị na-ehichapụ bụ oke buru ibu
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe mgbe ahụ, ọ na-akpata ka usoro okuku na iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-eji enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ahịhịa ihe na-ehichapụ mgbe ahụ, ọ na-akpata mbipụta nke pụrụ imeri na iji ahịhịa ya ngwa
Olee otú iji ahịhịa ya
Usoro nke metụtara ngwa bụ ezigbo mfe ma ghara a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nzọụkwụ na-aka na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na screenshots na-agbakwunyere n'ime usoro na-ele anya na iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ a na-nyere ka ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla. Usoro bụkwa mfe iji mejuputa na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro a mgbe ọsọsọp nke ọ bụla nzọụkwụ nnọọ iji jide n'aka na ihe kasị mma na ọkaibe rụpụtara na-enwe enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge. Ọ na-gwara na a onye ọrụ kwesịrị inwe ọkachamara ndụmọdụ ma ọ bụrụ na usoro yiri ka siri ike:
1. The nzuzo ntọala ndị ga-agbanwe na Mac. N'okpuru nche na nzuzo> General> Kwe Ka ngwa ibudatara> n'ebe ọ bụla iji jide n'aka na ngwa na-ebudatara:
2. Site URL http://www.nonamescriptware.com/installation-and-usage/ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwa na-ebudatara, arụnyere na ulo oru:
3. The ngwa a na-ahụ na-agba ọsọ na 32 bit mode na ọ ga-ahụ na ahịhịa ihe na-weghaara onwe ya, ya mere ọ ga-emekwa ka n'aka na usoro e okokụre kpam kpam enweghị ihe ọ bụla hassle. The ahịhịa akara ngosi ga-atụgharị green:
Uzo ozo ka n'ebemkpofuozi ya
E nwere ọtụtụ ngwa na ike ga-eji dị ọzọ ka n'ebemkpofuozi ya, ya mere ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà results na-etinyere na nke a. Na a nkuzi Otú ọ dị ndị kasị mma ngwa na ike ga-eji na ebe nke Mkpofu ọ ga-kwuru na banyere ga-emekwa ka n'aka na nkọwa banyere ngwa na-nyere. Kasị nkịtị 3 ngwa ọdịnala ndị dị ka ndị:
1. Mkpofu burner
Ọ bụkwa otu n'ime ngwa nke na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahịhịa nsị results on Mac na ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ mgbe chere ihu na mbipụta na ahịhịa na-amụbawanye oge ọ bụla. Usoro nke iji ngwa a akụkọ dị mfe ma nwere ike mfe ịchọta na web.
Ọzọ jụụ na ngwa na-ga-eme ka n'aka na nsị ahịhịa bụghị a nnukwu ndibiat mgbe niile. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ na-akawanye ọmụma banyere ehichapụ faịlụ enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge ọkọbọ ọrụ mere na-enweghị nsogbu ọ bụla.
3. Smart ahịhịa
Ọ bụ-ahụ kwuru na a ngwa e gosiri elu site ọrụ dị ka ọ na kemgbe otu nke kasị mma enyi n'ihi na ndị niile bụ ndị chọrọ iji na-enweta ahịhịa efu nke kpebiri enweghị ihe ọ bụla nke. Yiri ọzọ abụọ ngwa na ojiji bụ pụtara dị mfe.
Olee otú imezi efu ahịhịa na Mac ịzọpụta gị data
MacSoft: agbọpụta Warrior maka Mac
Top 4 Ụzọ Nyefee iPhone Pictures na mpụga ike mbanye na Maverics
> Resource> Mac> The nduzi kasị mma ka n'ebemkpofuozi ya na otú ọ ga-enyere gị aka